इपिएल : सर्वाधिक रन बनाउनेमा विदेशीकै दबदबा | Hamro Khelkud
इपिएल : सर्वाधिक रन बनाउनेमा विदेशीकै दबदबा
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – ब्याटिङ नेपाली क्रिकेटको परम्परा समस्या हो । अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु दुवै प्रतियोगितामा नेपाली ब्याटरको प्रदर्शन कमजोर रहने गर्दछ । कमजोर ब्याटिङले एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपिएल) को चौथो संस्करणमा पनि निरन्तरता पाएको छ । इपिएलको लिग चरणका खेल सकिँदा ब्याटिङमा तुलनात्मक रुपमा विदेशी खेलाडीको प्रदर्शन नै अब्बल रह्यो ।
सर्वाधिक रन बनाउने शीर्ष १० ब्याटरमा ३ मात्र नेपाली खेलाडी रहे । तीनै ब्याटर वर्तमान राष्ट्रिय टोलीमा छैनन् । त्यसमध्य दुई जनाले हालसम्म राष्ट्रिय टोलीमा खेलेकै छैनन् । यस संस्करणमा राष्ट्रिय टोलीमा रहेका कुनैपनि ब्याटरले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् । वर्षा र भिजेको आउटफिल्डले प्रतियोगिता खल्लो बनाइरहँदा स्वदेशी खेलाडीको कमजोर प्रदर्शनले त्यति धेरै उत्साह आउन सकेन । यसअघि पनि विदेशी खेलाडीकै प्रदर्शन उत्कृष्ट हुने गर्दथ्यो । तर विगतझैं यसपटक विदेशी खेलाडीबाट पनि अपेक्षा अनुसार ब्याटिङ प्रदर्शन देखिएको छैन ।
ललितपुर प्याट्रियट्सले विराटनगर वारियर्सविरुद्ध इपिएल इतिहासकै सर्वाधिक २ सय २६ रन बनाएको थियो । लिगमा कुल १६ अर्धशतक प्रहार भए । जसमा ५ नेपाली खेलाडीको नाम छ । समग्रमा इपिएलको चौथो संस्करणमा सर्वाधिक रन बनाउने १० खेलाडी यस प्रकार छन् ।
१०. अनिल कुमार शाह (विराटनगर)
राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिसकेका युवा विकेटकिपर अनिलले इपिएलमा औसत प्रदर्शन गरे । राष्ट्रिय टोलीमा पूनरागमनको पर्खाइमा रहेका अनिलले ५ खेलमा १२७ को स्ट्राइक रेटमा कुल १ सय ८ रन बनाए । औसत २७ को रहँदा प्रतियोगिताभर ८५ बलको सामना गरे । उनले ५ चौका र ७ छक्का प्रहार गरे ।
काठमाडौंसँग १६ बलमा २ चौका र ५ छक्का सहित ४५ रनमा अविजित रहँदै प्लेयर अफ द म्याच चुनिएका थिए । अन्य खेलमा प्रदर्शन अपेक्षा अनुसार हुन सकेन । पहिलो खेलमा चितवन टाइगर्ससँग ३२ र भैरहवा ग्ल्याडियटर्ससँग ११ रनमा आउट भएका थिए । अनिल ललितपुरसँग ८ र पोखरासँग खेलमा १२ रनमा आउट भएका थिए । विराटनगर प्रतियोगितामा पुछारमा रहेर बाहिरियो ।
९.आजमतुल्लाह ओमरजाई (ललितपुर)
अफगानिस्तानका युवा स्टार आजमतुल्लाह ओमरजाईले तल्लोक्रममा राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए । उनले ४ खेलमा १८८ को स्ट्राइकरेटमा एक अर्धशतक सहित कुल १ सय ९ रन बनाए । उनको औसत ३६ को रहँदा २ चौका र १२ छक्का प्रहार गरे । उत्कृष्ट प्रदर्शन र कुल बलको सामना ५८–५८ रह्यो । पहिलो खेलमा पोखरासँग १ रनमा आउट भएका थिए । तर दोस्रो खेलमा भैरहवाविरुद्ध २२ बलमा २ चौका र ४ छक्का सहित ४२ रन जोडेका थिए ।
तेस्रो खेलमा विराटनगरविरुद्ध २४ बलमा ७ चौका सहित कुल ५८ रनको आक्रामक इनिङ खेलेका थिए । उक्त खेलमानै ललितपुरले इपिएल इतिहासकै विशाल योगफल बनाएको थियो । बलिङमा ४ विकेट लिँदै प्लेयर अफ द म्याच चुनिएका थिए । चितवनसँग उनी ८ रनमा आउट हुनुको साथै २ विकेट लिए ।
८. विवेक कुमार यादव (पोखरा राइनोज)
पोखरालाई दोस्रो स्थानमा रहँदै क्वालिफायरमा पुर्याउन युवा ब्याटर विवेक कुमार यादवको प्रदर्शन उत्कृष्ट रह्यो । विवेकले खेलेको ५ खेल मध्य ३ इनिङमा ब्याटिङ गर्दै कुल १ सय १० रन बनाएका छन् । विवेकको स्ट्राइकरेट १२४ को रहँदा कुल ८९ बल खेलेका थिए । जसमा ८ चौका र ६ छक्का सामेल छ ।
विवेक पहिलो खेलमा भैरहवासँग १६ रनमा अविजित रहेका थिए । चितवनसँग विवेकले ४५ बलमा ३ चौका र ३ छक्का सहित ५३ रनमा अविजित इनिङ खेलेका थिए । काठमाडौंलाई पराजित गर्न विवेक २८ बलमा ४ चौका र २ छक्का सहित ४१ रनमा अविजित रहेका थिए । तीन विकेट लिएका विवेक प्लेयर अफ द म्याच चुनिएका थिए । तल्लोक्रममा ब्याटिङको अवसर पाएका विवेकले राम्रो सदुपयोग गरेका छन् ।
७. रिचर्ड लेभी (पोखरा)
दक्षिण अफ्रिकी ओपनर रिचार्ड लेभी यस सिजनमा अपेक्षा गरे अनुसार चल्न सकेका छैनन् । गत सिजनमा लेभीले विष्फोटक ब्याटिङ गरेका थिए । लेभीले ५ खेलमा कुल १ सय २२ रन बनाएका छन् । स्ट्राकरेट १ सय ५२ को रहँदा औसत ३०.५० छ । लिगमा कुल ८० बल खेलेका उनले १२ चौका र ७ छक्का प्रहार गरेका छन् ।
लेभी पहिलो खेलमा भैरहवासँग शून्य, ललितपुरसँग ३८ अविजित र चितवनसँग २० रन बनाएका थिए । विराटनगरसँग ४७ र काठमाडौंसँग खेलमा १७ रनमा आउट भएका थिए ।
६.सिकन्दर राजा (विराटनगर)
जिम्बावेका टि२० कप्तान सिकन्दर राजाले राम्रो प्रदर्शन गरेपनि अन्य खेलाडी नचल्दा टोली लिगबाटै बाहिरिन पुग्यो । राजाले ५ खेलमा १ अर्धशतक सहित कुल १ सय २९ रन बनाए । स्ट्राकइकरेट १३९ को रहँदा औसत २५.८० कोछ । कुल ९३ बल खेलेका राजाले ६ चौका र १२ छक्का प्रहार गरे ।
राजाले पहिलो खेलमै चितवनविरुद्ध ४७ बलमा २ चौका र ७ छक्का सहित ६७ रन बनाउनुको साथै २ विकेट लिएका थिए । भैरहवासँग ५, ललितपुरसँग २४, पोखरासँग २९ र काठमाडौंसँग खेलमा ४ रनमा आउट भएका थिए ।
५. भीम सार्की (चितवन)
चितवन टाइगर्सका भीम सार्की यस सिजनको इपिएलमा सर्वाधिक रन बनाउने नेपाली खेलाडी हुन् । चितवनलाई शीर्ष स्थानमा रहँदै क्वालिफायरमा पुर्याउन भीमको प्रदर्शन महत्वपूर्ण रह्यो । भीमले ५ खेलमा १ अर्धशतक सहित कुल १ सय ३३ रन बनाएका छन् । उनले १ सय ३३ को स्ट्राइक रेटमा रन बनाएका छन् । कुल १ सय बल खेलेका भीमले १५ चौका र ४ छक्का प्रहार गरेका छन् ।
भीमले पहिलो खेलमा विराटनगरसँग ११ बलमा ५ चौका र १ छक्का सहित आक्रामक ३० रन जोडेका थिए । काठमाडौंसँग ६ रनमा आउट हुँदा पोखरासँग ५४ रनको अविजित इनिङ खेलेका थिए । ललितपुरसँग २७ र भैरहवासँग १६ रनमा आउट भएका थिए । भीमले इपिएलमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै टोलीमा पूनरागमनको सम्भावना देखाएका छन् ।
४. रायन बर्ल (काठमाडौं)
जिम्बावेका स्टार अलराउन्डर रायनले इपिएलमा राम्रो प्रदर्शन गरेका छन् । रायनले ४ खेलमा २ अर्धशतक सहित १५९ को स्ट्राइकरेटमा कुल १ सय ३८ रन बनाएका छन् । औसत ४६ को रहँदा ८७ बल खेलेका छन् । ५ चौका र १२ छक्का सामेल छ । पहिलो खेलमै बर्लले ललितपुरविरुद्ध ३४ बलमा २ चौका र ७ छक्का सहित अविजित ७३ रनको इनिङ खेलेका थिए ।
उक्त खेलमा दुई विकेट लिएका बर्ल प्लेयर अफ द म्याच चुनिएका थिए । बर्ल चितवनसँग शून्यमा आउट हुँदा विराटनरसँग १५ रनमा आउट भएका थिए । पोखरासँग खेलमा बर्लले ५० रन बनाएका थिए ।
३. उपुल थरंगा (भैरहवा)
श्रीलंका पूर्व कप्तान उपुल थरंगा इपिएलमा सर्वाधिक रन बनाउने तेस्रो खेलाडी हुन् । भैरहवाबाट मध्यक्रममा ब्याटिङ गरेका थरंगाले ४ खेल मध्य ३ इनिङमा कुल १ सय ४० रन बनाएका छन् । १ सय ४३ को स्ट्राइकरेटमा ब्याटिङ गरेका उनले कुल ९८ बल खेलेका छन् । थरंगा भैरहवासँग खेलमा ३४ रनमा अविजित थिए ।
दोस्रो खेलमा ललितपुरले प्रस्तुत गरेको १ सय ७८ रनको लक्ष्य पछ्याउँदै खेल टाई गराउन ४४ बलमा ६ चौका र ३ छक्का सहित ६७ रनको अविजित इनिङ खेलेका थिए । चितवनसँग खेलमा थरंगा ३९ रनमा अविजित रहेका थिए ।
२. मोहम्मद शाहजाद (चितवन)
अफगानिस्तानका विष्फोटक ब्याट्सम्यान मोहम्मद शाहजादले ५ खेलमा १ सय ४८ रन बनाएका छन् । स्ट्राइकरेट १ सय २२ को हुँदा कुल १८ चौका र ६ छक्का प्रहार गरेका छन् । उनले सर्वाधिक १ सय २२ बल सामना गरेका छन् । शाहजाद पहिलो खेलमा विराटनगरसँग १ रनमा आउट भएका थिए ।
काठमाडौंसँग १७ रनमा आउट हुँदा पोखरासँग खेलमा ६३ रनमा अविजित रहँदै प्लेयर अफ द म्याच चुनिएका थिए । ललितपुरसँग ३५ र भैरहवासँग ३२ रनमा आउट भएका थिए ।
१. सान्दुन विराक्कोडी (ललितपुर)
ललितपुर लिगबाटै बाहिरिएपनि सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको सूचिमा श्रीलंका सान्दुन विराक्कोडी रहे । विराक्कोडीले ५ खेलमा २ अर्धशतक सहित कुल १ सय ६६ रन बनाए । उत्कृष्ट प्रदर्शन ७३ रहँदा उनले कुल १ सय १४ बलको सामना गरे । १ सय ४६ को स्ट्राइकरेटमा ब्याटिङ गर्दै १६ चौका र ९ छक्का प्रहार गरे ।
उनी पहिलो खेलमा काठमाडौंसँग २ र पोखरासँग १९ रनमा आउट भएका थिए । भैरहवासँग ५८ र विराटनगरसँग ७३ रनको इनिङ खेलेका थिए । चितवनसँग १७ रनमा आउट भएका थिए ।
यो पनि : ब्याटिङ सुधार्दै सन्दीप भन्छन् – ‘बलिङ र कप्तानीमा असर गर्दैन’